Welcome to Aayaha Nolosha » MA JIRI KARTAA HOOYO SIDAN AH? ANIGA ILAMA AHA.
MA JIRI KARTAA HOOYO SIDAN AH? ANIGA ILAMA AHA.
May 14, 2018 - Waxaa Qorey : Mohamed farah -
Odey adeerkey ah oo Waaninayey nin dariskiisa ahaa oo ku qaylinayey in uu Xaaskiisa furayo ayaa sheeko u Soo qaatey, Waan Xasuustaa 1994tii ayey ahayd. Sheekadaa ayaan dhageysanayey aad ayeyna ii Xiiso galisey, waxa ayna ahayd Sidan.
Nin ayaa Waxa uu habeenkii go,aansadey in uu xaaskiisa furo oo walaalkeed oo ay Saaxiib ahaayeen inta uu u Wado uu hortiisa ku furo isaga oo u sheegaya Sababaha uusan ku Sii qabi karin.
Subaxdii ayuu kiciyey waxa uuna yiri “Ina keen Guriga Walaalkaa ayaan aadeynaa…waan Soo Salaameynaa ee”. Balse Maadama Xaley oo dhan Roob da,ayey beerihiina Waraabeen waxa ay u kalaheen Abuur isaga iyo Xaaskiisiiba.
Waa ay yaqaaneen halka ay beertu ku taaley ee waxa uu u Sheegey in ay beerta uga daba tagayaan, waana ay soo baxeen. Markii ay u soo dhowyihiin oo ay u Muuqdaan ninkiina uu beertii Miigeynayo, Maamaduna ay Abuurka ku rideyso, ayaa waxa uu arkey ninka oo kolba Marka uu dhowr Talaabo qaado Gadaal soo fiirinaya kuna dhawaaqaya. ” Hooy….Hooy….Hooy”.
Waa uu yaabey beerta hadda la Abuurayo ee aan Shimbir laga Celinaynin. Waa ay Soo gaareen Markaa ayaa isagiina Miigo qaatey gabartiina ay abuur ka daba ridey Waa Xeer beeraley ee. Markii in Muddo ah Abuurkii la ridayey ayaa Geed Weyn oo garas ah la Fariistey oo lagu Shaah Cabey Markaa ayaa la isu Soo jeestey Martidii ayaana la Weydiiyey Waxa halkan keeney beerta oo Magaalada ka fog soo lugeysiiyey, balse inta uusan uga Jawaabin sababta Keentay ayuu isagu Su,aal kale Weydiiyey.
“Markaan Soo Soconey intaad kolba gadaal soo eegto ayaad Hooy..Hooy…lahayd beertana Shimbir lagama celinayo oo hadey abuur tahay ee Maxaa jirey?!!”.
Waxa uuna ugu Jawaabey ” Maamada ayaa Cunuga ay Xambaarsatahay habka ka Cabi oo haddii aan sii jeesto qub..qub.. Ka siin Caanaha Cunuga ee ii Warama idinka maxaa darnaa?”. Markaa ayuu isbadaley oo yiri “Maya gurigii ayaan tagney si aan idiin soo salaano, marka in aad beerta Soo jirtaan ayaa naloo sheegay ee Dhib kale Ma jirin”.
Markiiba Waxa uu qaatey Go,aan kale isaga oo ka laabtey Furidii, waxa uuna ogaadey waxa iska Fudud ee uu Naagtiisa ku furi rabey iyo waxa uu rag ku qabo, oo ay ku haystaan. Xigmada Sheekadan ayaa ah in Wax walba oo aad tirsaneyso, wax ka Culus ay rag qabaan iyo in aadan sii shaacin go,aanka aad gaarto, waxaa laga yaabaa in aad ka laabato ee, haddii ninkan uu Xaaskiisa u sii sheegi lahaa kama ay yeesheen in uu go,aanka badalo oo waxa ay dhihi lahayd. “Ha isbadalin ee meeshan Furid ayaan u imaaney ee bartaa dhig Madaxeyga”.